Mugovera 6 Mbudzi 2021
Chishanu 5 Mbudzi 2021
Hofisi Yekutengesa "Gomo" ndiwo musimboti weiyi hofisi yekutengesa, iyo inokurudzirwa neiyo nzvimbo yeChongqing. Maitiro emabhuru emvuu pasi anogadzira mukuumbwa matatu; uye kune akawanda asinganzwisisike uye akapinza maakona uye emakona pamadziro emhando uye zvisingaenzaniswi zvakavezwa mapepa ekugamuchira, kuratidza pfungwa ye "gomo". Uye zvakare, masitepisi anobatanidza pasi pasi anogadzirwa kuva ndima kuburikidza nebako. Zvichakadaro, magetsi emwenje akaturikwa kubva mudenga, kutevedzera kunaya kwemvura mumupata uye kuratidza manzwiro echisikigo, kunyorovesa zvirevo zvese.
Rug MaRugs ari muchibereko akapfava, chinangwa chaive chekupokana neichi chokwadi. Iko kunyepedzera kwematatu-dimensionality inowanikwa nemavara matatu chete. Izvo zvakasiyana-siyana zvematoni uye kudzika kwerabha kunoenderana nehupamhi uye hushoma hwemavara, pane kuti pendi hombe remavara ringaise pamwe neimwe nzvimbo, nokudaro ichibvumira kushandiswa kwakachinjika. Kubva kumusoro kana kuti kure, iyo rug yakafanana neyaka peta. Nekudaro, kana ugere kana kuti wakarara pamusoro payo, kunyepedzera kwemapundu kunogona kunge kusiri ekuona. Izvi zvinotungamira pakushandiswa kwemitsetse yakapetwa yakapfupika iyo inogona kunakidzwa senge nzira isingabvumirwe kumusoro pedyo.
Graphic Dhizaini Inobudirira Hofisi Yekutengesa Mifananidzo Yeimba Yezororo Rug Chipfeko Mutsipa